विहान उठ्दा स्वास गराउछ ? यो हटाउने १ मात्र बिकल्प « Channel Np
विहान उठ्दा स्वास गराउछ ? यो हटाउने १ मात्र बिकल्प
प्रकाशित मिति : Thursday, July 11th, 2019 at 9:03 AM
विज्ञानले विहान स्वास गनाउने समस्यालाई ‘ह्यालिटोसिस’ (Halitosis) भन्छ। दाँत सफा नगर्ने बानीले गर्दा, सुत्ने तरिका नमिल्दा अनि केही खानेकुराह खाँदा विहान स्वास गनाउने गर्दछ। राति सुत्दा मुख सुक्खा भयो भने पनि स्वास गनाउने गर्दछ। हुन त दुर्गन्धित स्वास हुनुका कारणहरू थुप्रै छन्, तर त्यी समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाहरू पनि पक्कै थुप्रै छन्।
तीमध्येकै केहि सम्भव तरिकाहरू यसप्रकार रहेका छन् :
१. सुत्नुभन्दा अगाडि दाँत माझ्ने बानी बसाल्नुहोस्
२. दिनमा एकचोटि जीब्रो सफा गर्नुहोस्
३. नुन पानीले मुख कुल्ला गर्नुहोस्
अल्कोहलको मात्रा भएका मुख कुल्ला गर्ने तरल पदार्थहरूले मुखलाई झन् बढी सुक्खा गराउँदछ। त्यसैले मुख कुल्ला गर्दा घरेलु उपाय अपनाउन पनि सकिन्छ। त्यसको लागि १ गिलास मनतातो पानीमा आधा चम्चा नुन राखेर घोल्नुहोस् र त्यस पानीले मुख कुल्ला गर्नुहोस्। त्यसो गरेमा स्वासलाई दुर्गन्धित बनाउने ब्याक्टेरियाहरू मर्दछ। औषधी पसलमा अल्कोहल नमिसाइएको माउथवासहरू पनि पाइन्छन्, त्यसको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी मुख कुल्ला गर्दा रातभरी मुखमा जम्मा भएर बसेका ब्याक्टेरियाहरू हट्छन् र स्वास गनाउने समस्यामा कमी हुँदै जान्छ।
४. सुत्ने बानीलाई सुधार्नुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस् : सुन्दर आँखीभौंका लागि अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
५. सुत्नुभन्दा अगाडि नाकबाट सास फेर्ने बानी गर्नुहोस्
६. सुत्नुभन्दा अगाडि १ गिलास पानी पिउनुहोस्
७. ताजा फलफूल तथा साजसब्जिहरू खानुहोस्
धेरै बोसो तथा चिल्लो भएका खानेकुराहरू नखाँदैमा उचित हुन्छ। त्यसले गर्दा मुखमा किटोन्स (ketones) नामक रसायन जम्मा हुन्छ, जसले एकदमै दुर्गन्धित सास पैदा गराउँदछ। त्यसैले यस्ता खानेकुराहरू खानुभन्दा पहिले विचार पुर्याउनु जरुरी हुन्छ।
८. लसुन, प्याँज र पीरो खानेकुराहरू नखानुहोस्
९. गुलियो खानेकुरामा कमी गर्नुहोस्